बिज्ञान प्रबिधि – Page4– shubhabihani
Home / बिज्ञान प्रबिधि (page 4)
विश्वकै गणितिय झण्डा, नेपालको राष्ट्रिय झण्डा
‘सिम्रिक रंगको भुइँ र गाढा नीलो रंगको किनारा भएको दुई त्रिकोण अलिकति जोडिएको, माथिल्लो भागमा खुर्पे चन्द्रको बीचमा सोह्रमा आठ कोण देखिने सेतो आकार र तल्लो भागमा बाह्र कोणयुक्त सूर्यको सेतो आकार अंकित भएको झण्डा नेपालको राष्ट्रिय झण्डा हो ।’ नेपालको संविधान २०७२ को धारा ८ मा नेपालको झण्डालाई यसरी चिनाइएको छ। विश्वमै भिन्न रहेको नेपालको राष्ट्रिय झण्डा सबैभन्दा रोचक पनि छ।
यो विश्वकै एक मात्र त्यस्तो राष्ट्रझण्डा हो जुन आयतकार अनि वर्गाकार छैन। समानान्तर तान्दै, लम्ब खिच्दै, वृत बनाउँदै गणितिय विधिको प्रयोग गरि झण्डा कसरी बनाउने भनि संविधानमै उल्लेख गरिएको छ।
नेपालको संविधान २०७२ को अनुसुचि १ मा नेपालको झण्डा बनाउन ३ पेजमा विधि निर्धारण गरिएको छ। यो विधि पछ्याउँदा सजिलै दुई त्रिकोण सहितको माथिल्लो भागमा खुर्पे चन्द्रको बीचमा सोह्रमा आठ कोण देखिने आकार र तल्लो भागमा बाह्र कोणयुक्त सूर्यको आकार भएको झण्डा सजिलै बनाउन सकिन्छ। झण्डामा भएका प्रत्येक आकार गणितले यसरी परिभाषित गर्न सकिने नेपालको झण्डा विश्वकै सबैभन्दा गणितिय झण्डा हो।
गणित, गणितका तथ्य तथा रोचक प्रश्नको जवाफ दिने युट्युव च्यानल नम्बरफाइलको यो भिडियो हेर्नुस्
नेपालको संविधान २०७२ पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुस्
अझै थप पढ्न: झण्डा कसरी बनाउने यहाँ हेर्न सकिन्छ
विश्वका देशहरुको झण्डा तस्विरमा यहाँ हेर्न सकिन्छ
सूर्यमा कालो दाग देखियो, अझै केही दिन रहने
८ जेठ, काठमाडौं । बिहीबारदेखि सूर्यमा लाग्दै आएको दाग अझै केही दिन रहने भएको छ । सूर्यमा देखिएको दाग हेर्दा सानो देखिए पनि पृथ्वीको आकारभन्दा धेरै ठूलो रहेको छ ।
सूर्यमा हुने गतिविधिले तापक्रममा घटबढ हुँदा यस्ता दाग देखिने गरेको नेपाल खगोलीय समाजका अध्यक्ष सुरेश भट्टराईले बताए ।
सामान्यतः सूर्यको तापक्रम छ हजार डिग्री सेन्टिग्रेड हुने गरेकोमा अहिले दाग देखिएको ठाउँमा करिब एक हजारदेखि १५ सय डिग्री सेन्टिग्रेड कम भएको हुनसक्ने उनको भनाइ छ ।
सूर्यबाट निस्किने पदार्थ पृथ्वी नजिक आएमा त्यसले अन्तरिक्षयान, भू–उपग्रहलाई बिगार्न सक्दछ । ‘सूर्यमा चुम्बकीय गतिविधिले गर्दा तापक्रममा हुने परिवर्तनले गर्दा देखिएको ए आर २५४६ नामको सो दागलाई हामीले पनि नियमित अवलोकन गरिहेका छौं, उनले भने ।
सूर्यमादेखिएको दाग खुल्ला आँखाले पनि देख्न सकिने भएपनि त्यसरी हेर्न हुँदैन । सुरक्षित चश्माबाट भने हेर्न सकिने छ । कसैलाई हेर्ने चाहना भएमा गौशालास्थित समाजको कार्यालयमा राखिएको टेलिस्कोपबाट हेर्न सकिने प्रबन्ध मिलाइएको छ ।
इन्टरनेट नै चलाउन नदिने यि कस्ता देश ?
एजेन्सी ।मानिसको जीवनमा ईन्टरनेट अत्यावश्यक चिज बनिसकेको छ। इन्टरनेट विना मानिसको जीवन असम्भव जस्तै छ । तर विश्वमा यस्ता देशहरु पनि छ जहाँ प्रख्यात सामाजिक संजाल र सर्च इन्जिनहरु प्रतिवन्धित छन् । अमेरिका र विश्वका विभिन्न स्थानमा सर्वर बनाएर आफ्नो अधिपत्य बढाएको फेसबुक र गुगलको पहुँच आफ्नो देशमा नबढोस भनेर चीनले बाईडु नामको सर्च इन्जिन बनाएर चलाएको छ भने सामाजिक संजालको रुपमा उनीहरुले विच्याट सम्म चलाउन दिएका छन् ।
उत्तर कोरियामा चार प्रतिशतले मात्र इन्टरनेटमाथि पहुँच राख्छन् ।
सिरियामा सरकारविरुद्ध लेख्ने वेबसाइट तत्काल बन्द गरिन्छ । इरानामा मानव अधिकारका सम्बन्धमा लेख्ने वेबसाइटमाथि प्रतिबन्ध छ भने साउदी अरबमा मुस्लिम विरोधी वेबसाइट प्रतिबन्धित छन् ।
इन्टरनेटमाथि प्रतिबन्ध लगाउने केहि देशहरु
इरानका ब्लगर सरकारी कर्मचारी, धर्म र राजनीति नेतृत्वका विरुद्ध बोल्ने कोशिस गर्छन् । ब्लग चलाउन चाहनेले उसको सांस्कृतिक पहिचान र पूर्ण विवरण रजिस्टर गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ ।
सिरियामा सरकारको प्रोपोगाण्डा गर्ने र मानवअधिकारका विषयमा लेख्न वेबसाइटमाथि प्रतिबन्ध लाग्ने गर्छ । सिरियामा सन् २००९ को निर्वाचनताका फेसबुक बन्द गरिएको थियो ।
एक अध्ययनका अनुसार साउदी अरबमा चार लाख बढी वेबसाइट बनेका छन् । साउदीमा मुस्लिम विरोधी वेबसाइट सबै बन्द गरिएको छ । जहाँ प्रोनोग्राफी सम्बन्धी वेबसाइटमा समेत प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।
चीनमा संसारकै सबैभन्दा बढी इन्टरनेटमा प्रतिबन्ध लगाउने नियम छ । शक्तिमा भएका र पार्टीका उच्च व्यक्तिले इन्टरनेटमा सहजै पहुँच राख्छन् । त्यहाँका सर्वसाधारणले संसारभरका वेबसाइट भिजिट गर्न पाउँदैनन् ।
चीनमा अधिकांश सामाग्री फिल्टर गरेर मात्र हेर्न सकिन्छ । त्यहाको सरकारले गुगल र फेसबुकलाई बन्द गरेको छ । तर, उसले गुगल जस्तै सर्च इन्जिन र फेसबुक जस्तै सामाजिक सञ्जाल बनाएको छ ।
चीनमा ब्लगमा समेत प्रतिबन्ध लगाइएको छ । चीनले तिब्बतीय र ताइवानी स्वतन्त्रा सम्बन्धी क्रियाकलाममा प्रतिबन्ध लगाएको छ । त्यस्तै, इन्टरनेटमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका कुरा र प्रपोगाण्डा गरेर लेख्न पाइदैन ।
उत्तर कोरियामा कुल जनसंख्याको चार प्रतिशत जनतामात्र इन्टरनेटको पहुँचमा छन् । चार प्रतिशतले चलाउने इन्टरनेटमा समेत ठूलो प्रतिबन्ध छ । इन्टरनेट पहुँचमा भएकाले समेत उनीहरुले चाहे अनुसारका वेबसाइट भिजिट गर्न पाउँदैनन् ।
सबै वेबसाइट उत्तर कोरियाली सरकारको नियन्त्रणमा हुन्छन् । अझ रोचक कुरा त के छ भने उत्तर कोरियामा ब्लग चलाउन अनुमती नै छैन । जहाँ विश्वमै अति लोकप्रिय मानिएको फेसबुक जस्ता सामाजिक सञ्जालमा समेत प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।
सिरियामा उत्तर कोरिया र चीन भन्दा अलि फरक प्रतिबन्धको व्यवस्था छ । जहाँ जुन वेबसाइट र ब्लगले सरकारका विरुद्ध लेख्छन् ति तत्काल बन्द हुन्छन् ।
जहाँ साइबर चलाउनेले छुट्टै पहिचानसहितको परिचय पत्र बनाउनु पर्छ । साइबर सञ्चालकले समय तोकेर मात्र चलाउन पाउने व्यवस्था छ । राज्यको नियम र कानुन अनुसार मात्र इन्टरनेटको पहुँचमा रहेर काम गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
ल्यापटप चार्जरको टुप्पामा हुने त्यो गोलो लाम्चो डल्लो के-को लागि हो, थाहा छ?
अब कसैले तपाईँलाई त्यो सानो डल्लाको काम के हो भनेर सोध्यो भने मज्जाले भनिदिनुहोस् कि त्यो नभैदिएको भए तपाईँको ल्यापटप पड्केर जलेर खरानी भैसक्थ्यो।
भूकम्प जाने सूचना मोबाइलबाट यसरी थाहा पाउनुस
एजेन्सी: अमेरिकास्थित क्यालिफोर्नियाका वैज्ञानिकहरुले एक यस्तो मोबाइल एप बनाएका छन् जसले भूकम्पमाथि नजर राख्न अब सजिलो भएको छ ।
‘माईशेक’ नामको यो एपबाट तपाईं आउनेवाला भूकम्पबाट सावधान त रहन सक्नुहुन्छ नै यो एपले धनमाल र ज्यानमा क्षति हुनबाट रोक्न पनि मद्दत गर्न सक्छ ।
यो स्मार्टफोनको मोशन सेन्सरको मद्दतबाट धर्तीको तल भइरहने कुनै पनि हलचललाई पत्ता लगाउन सक्छ । फोन तपाईंको ब्याग या गोजीमा हुँदा पनि यसले सजिलै जुनसुकै समयमा काम गर्न सक्छ ।
यस प्रोजेक्टलाई चलाइरहेका प्रोफेसर रिचर्ड एलेनले बीबीसीलाई बताए अनुसार एप बनाउनेले हजारौं फोन प्रयोगकर्ताको मद्दतमा एक डाटा नेट्वर्क खडा गर्न चाहन्छन्, जसले आउनेवाला भूकम्पबाट सावधान रहन चेतावनी पनि दिन सक्नेछ । यस एपलाई ‘माईशेक डट बर्कले डट ईडीयु’ वेबसाइटबाट डाउनलोड गर्न सकिन्छ ।
‘यो एप तपाईंको फोनकके ब्याकग्राउन्डमा चुपाचाप काम गरिरहन्छ। जब कुनै भूकम्प आउँछ, यसले त्यो सूचना दिन्छ ।यो सूचना हाम्रो सर्भरलाई पठाउनेछ’, एलनले भने, ‘सर्भरबाट हामी भन्न सक्छौं कतै भूकम्प आइरहेको छ। त्यतिमात्र होइन कति शक्तिशाली भूकम्प आयो भन्ने पनि पत्ता लाग्छ ।’
उनले अगाडि भने, ‘भविष्यमा हामी यो जानकारी आफ्ना प्रयोगकर्तालाई पठाएर उनीहरुलाई सचेत गराउन सक्छौं, घरबाट बाहिर जानुअघि भूकम्पबारेमा जानकारी लिनुस् ।’
यो एपले हिँडडुल गर्दा वा अन्य सामान्य हलचलबाट हुने कम्पन र भूकम्पपको कम्पनलाई पनि छुट्याउन सक्ने गरी बनाइएको छ ।
खतरनाक ढंगले जमीनमा आएको हलचललाई केन्द्रबाट शुरु भएर ठूलो भूकम्प बनिनसक्न केही समय लाग्ने गर्छ । यसैबीच यो एपको मद्दतमा मानिस कुनै सुरक्षित जग्गासम्म पुग्न सक्ने बताइएको छ ।
एलेन भन्छन्, ‘केही सेकेन्डक चेतावनी नै सबैथोक हो, जो भूकम्पका क्रममा तपाईंलाई भगाउन र ज्यान बचाउनका लागि पर्याप्त हुन्छ । ‘अहिलेसम्म यो एपबाट १० किलोमिटरको दायरामा पाँच रिक्टर स्केलसम्मको भूकम्पको जानकारी दिन सक्षम छ ।
बर्कले सिस्मोलोजिकल ल्याब्रोटरीका वैज्ञानिकका अनुसार पछिल्लो यो एपको मद्दतमा ज्यान जाने संख्यामा कम्तिमा पनि ५० प्रतिशत कमी ल्याउन सकिन्छ ।
विश्वको सबैभन्दा डरलाग्दो अनि महंगो धातु, १ ग्रामको मुल्यले १०० देश किन्न सकिने,
सुनको मुल्य लगातार झर्दै छ। महंगो धातु भएको कारण सुनको माग पनि बढ्दो छ। व्यक्ति देखि देशले पनि आफ्नो सम्पत्तिको हिस्सा सुनको रुपमा सुरक्षित राख्ने गर्छन। तर यो सुनेर औनोठो लाग्ला कि विश्वका महंगो धातुमा सुन पर्दैन। विश्वमा त्यस्ता धातु छन्, जसको नाम कम सुनिन्छन् तर निकै महंगो हुन्छन्। त्यस्तैमा एक धातु हो, ‘एन्टीम्याटर’। एन्टीम्याटरको एक ग्रामको मुल्य करिब ६.२५ लाख करोड डलर पर्न आउँछ।
के हो एन्टीम्याटर
वैज्ञानिकहरुको अनुसार, एन्टीम्यार एक पदार्थ हो जसको अणु भित्र हेरक चीज उल्टो हुन्छ। सबै पदार्थ अणु (atom) मिली बनेको हुन्छ‍। प्रत्येक अणु भित्र इलेक्ट्रोन, प्रोटोन र न्युट्रोन हुन्छ। सामान्य अणुमा ‘पोजेटिभि’ चार्जको न्युक्लियस र नेगेटिभ चार्जको इलेक्ट्रोन हुन्छ। तर एन्टीम्याटरको न्युक्लियस नेगेटिभ चार्ज को र इलेक्ट्रोन पोजेटिभ चार्जको हुन्छ। यसलाई इन्धनको रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
सैद्धान्तिक तवरमा करिब आधा किलो एन्टीम्याटर, संसारकै सबैभन्दा ठुलो हाइड्रोजन बम भन्दा बढी शक्तिशाली हुन्छ। तर यसबाट उपयोगी उर्जा प्राप्त गर्न निकै ठुलो मात्रामा एन्टीम्याटर आवश्यक पर्छ। नाशाको प्रवक्ताको अनुसार १ मिलीग्राम एन्टीम्याटर बनाउन करिब ४०० लाख रुपैयाको आवश्यक पर्छ। अनुसन्धान गर्नको निमित्त १ मिलीग्राम पर्याप्त हुन्छ तर यसको व्यावसातिक उपयोग गर्नको लागि भने निकै खर्च लाग्ने हुन्छ।
कहाँ बाट आउँछ एन्टीम्याटर
एन्टीम्याटरलाई काल्पनिक तत्वको रुपमा बुझिदै आएको छ। बिसौं सताब्दीमा यसको खोज गरिएको थियो। अन्तरिक्षमा पनि सानो सानो टुक्रामा एन्टीम्याटर हुने गर्छ। सामान्य पर्दाथमा प्रोटोन, इलेक्ट्रोन र न्युट्रोन हुन्छ। त्यसरी नै एन्टीम्याटरमा एन्टीप्रोटोन, एन्टीइलेक्ट्रोन र एन्टीन्युट्रोन हु्छ। एन्टीम्याटरलाई प्रयोगशालामा बनाउँदा वैज्ञानिकहरुले अन्य पदार्थसंग मिसाएर थोरै परिवर्तन गर्ने गर्छन्। ताकि यसको प्रयोग इन्धनको रुपमा मात्र गरियोस। यो अन्तरिक्ष यानको इन्धन र परमाणु हतियार बनाउनको लागि पनि प्रयोगमा ल्याउन सकिने हुन्छ।
१ ग्राम एन्टीम्याटर बेचेर विश्वका करिब १०० वटा साना देशहरु किन्न सकिन्छ। १ ग्रामको करिब ६.२५ लाख करोड डलर पर्न आउँछ। यसरी हेर्दा एन्टीम्याटर संसारकै सबैभन्दा महंगो धातु हुन आउँछ। एन्टीम्याटर जहाँ बनाइन्छ त्यहाँ संसारकै सबैभन्दा कडा सुरक्षाको व्यवस्था हुन्छ। सुरक्षा घेरा निकै कडा हुन्छ। केही खास व्यक्ति बाहेक एन्टीम्याटरसम्म अन्य पु्ग्न सक्दैनन्।
किन महंगो हुन्छ एन्टीम्याटर
एन्टीम्याटर बनाउन प्रयोग हुने प्रविधि निकै महंगो छ। १ मिलीग्राम एन्टीम्याटर बनाउन करिब ४०० लाख रुपैया लाग्छ। परमाणु हतियार, मेडिकल इमेजिंग, अन्तरिक्ष यानको इन्धन आदि कार्यमा एन्टीम्याटर प्रयोग हुन्छ।
सौर्य प्रणाली भन्दा बाहिरबाट आउने धेरै शक्ति भएका विकिरणहरुले गर्दा विभिन्न थरीका एन्टीम्याटर बन्छन। सन् २०११ जनवरीमा अमेरिकन एस्ट्रोनोमिकर सोसाइटीले गरेको एक अनुसन्धानमा चट्याङ पार्ने बादलको माथी यस्ता एन्टीम्याटर बन्ने थाह भएको थियो। पर्याप्त तापक्रम भए जुनसुकै वातावरणमा पनि एन्टीम्याटर पैदा हुन्छ।
– See more at: http://www.zoomnp.net/archives/7712#sthash.wlt4FuHL.XP07SSvT.dpuf
मंगल ग्रहको ढुङ्गामा देवताको आकृति भेटियो!?
मंगल ग्रहको ढुङ्गामा देवताको आकृति देखिएको विषयले फेरी एक पटक चर्चा पाएको छ।
सोमबार, नाशाको मार्स अपर्चुनिटी रोभरले पठाएको यो तस्बिरमा एसिरियन जातीका मानिसले ज्ञानको देवता मान्ने नावुको अनुसारसंग मिल्ने आकृति फेला परेको छ। यो तस्विर अपर्चुनिटी रोभरले मंगल ग्रहको ‘कन्सेपसिवन क्रेटर’मा खिचेको थियो।
आज भन्दा करिब ४ हजारवर्ष पहिलेको प्राचिन जाती एसिरियनले सो बखत नै अन्तरिक्षमा यात्रा गर्ने गरेका थिए। सोही बखत आफ्ना देवताको मुर्ति मंगलमा छोडी आएको कथा रहिआएको छ।
तस्बिर खिचिएको मंगल ग्रहको कन्सेपसिवन क्रेटरको वरिपरि ढुङगामा खोपिएका अन्य आकृतिहरु भेटिएका कारण वैज्ञानिकहरुको पनि रहस्यमा छन्।
अपर्चुनिटी रोभरलाई मंगल ग्रहको वातावरणको बारेमा थप जानकारी खोज गर्न नाशाले प्रयोग गरिरहेको छ। नाशा भने, यसरी अन्जान ठाँउमा विभिन्न आकृति देखिनु दिमागको खेल मात्र भएको बताउँछ, जसलाई ‘परेइडोलिया’ पनि भनिन्छ।
पछिल्लो महिना मंगल ग्रहको एक पहाडमा ठुलो बुद्धको मुर्ति देखिएको भन्दै चर्चा गरिएको थियो।
युएफओ साइटिङस् डेलीका स्कट सी वारिङ भन्छन्, ‘नाशा सत्य बताउन चाहदैन, किनकी सत्य बताउँदा पत्ता लागेको जानकारी र प्रविधी पनि सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ।’
तर वैज्ञानिकले एलियन जीवनको प्रमाण लुकाउन खोजेका छैनन्, भन्छन् नाशाको रोभर प्रोजेक्टमा काम गर्ने अश्विन भसाभडा।
मंगल ग्रहमा कुनै समय जीवन थियो भन्ने तथ्यमा भने वैज्ञानिकहरु पनि सकारात्मक देखिन्छन्। त्यहाँको वातावरणमा आएको अचानकको परिवर्तनले मंगलग्रह जीवन विहिन भएको वैज्ञानिकहरुको अनुमान छ। तर पृथ्वीबाट मंगल ग्रहमा र मंगल ग्रहबाट पृथ्वीमा बसोबास गर्न मानिसहरु आउने भन्ने कथामा मात्र सिमित छ।
गुगलमा खोजेर उपचार गर्दछन् ९० प्रतिशत डाक्टर
सुन्दैमा यो कुरा अनौठो तथा अपत्यारिलो लाग्नसक्छ । तर सत्य केे हो भने एसियाका ९० प्रतिशत डाक्टरहरु गुगल लगायतका इन्टरनेट सर्चको आधारमा विरामीको उपचार गरिरहेका छन् । एशियाभर भएको अध्ययनले यस्तो खुलासा गरेको हो ।
रेफरेन्स ड्युरिंग टि्रटमेन्ट एण्ड सर्जरीले गराएको अध्ययन अनुसार डाक्टरहरुले विरामीको उपचारका क्रममा बिरामीको रोग तथा उपचारका विधिका विषयमा गुगलमा सर्च गर्दछन् । यसलाई डिजिटल क्रान्ती भन्ने की मेडिकल क्षेत्रको असक्षमता ?
अध्ययन अनुसार डाक्टरहरुले एक दिनमा कम्तिमा पनि ६ पटक इन्टरनेटमा आफ्नो पेशा सँग सम्बन्धित प्रोफेसनल सर्च गर्दछन्, इन्टरनेटमा । ५८ प्रतिशत फिजिसियनहरु कम्प्युटरमा इन्टरनेट र्स गरेरै उपचार गर्दछन् । १४ प्रतिशत डाक्टरहरु भने प्रकाशित माध्यममा भर पर्दछन् ।
अध्ययनबाट के खुलासा भएको छ भने हरेक तिन जनामा एक जना डाक्टरले बिरामीको उपचारका बेलामा हातमा मोबाइल फोन वा ट्याब्लेट बोक्ने गर्दछन् र केही समस्या हुने बित्तिकै सम्बन्धित रोग तथा त्यसको उपचारका विषयमा ग्याजेटमा इन्टरनेट सर्च गरिहाल्छन् ।
हेर्नुस् यी अनौठा ग्याजेट
हाम्रो जिवनमा स्मार्ट ग्याजेटहरुको ठूलो भूमिका रहँदै आएको छ । विश्वमा दैनिक रुपमा नयाँ नयाँ ग्याजेट लन्च भैरहेका छन् । जसमध्ये केही हाम्रो जिवनमा निकै काम आउँछन् भने कतिपयले हाम्रो कामलाई सजिलो बनाउँछन् । हामीले निकै साधारण सोँचिएका तथा नजरअन्दाज समेत गरिने कामहरुलाई समेत सहज बनाउनका लागि विभिन्न ग्याजेट बनाइएका छन् । यस्तै अनौठा ग्याजेटहरु यस्ता छन् :
ट्याग जिपिएस प्लस :
घरपालुवा जनावर खासगरी कुकुर बिरालोलाई ट्रयाक गर्नका लागि यो ट्याग जिपिएस प्लस निकै उपयोगी हुन्छ ।
यसमा थर्मोमिटर पनि जडान गरिएको हुन्छ जसले घरको कुकुर बिरालोको सरीरको तापक्रम पत्ता लगाउनेछ । यो जिपिएस ट्याग लगाएमा मूल्यवान कुकुर हराउने जोखिम कम हुन्छ र हराएमा पनि कहाँ पुगेको छ भनेर खोज्न सकिन्छ । यसको मूल्य ८५ पाउण्ड पर्ने र यो वर्षको अन्त्यसम्ममा बजारमा आउने बताइएको छ ।
लगबार इंक औँठी
यदि तपाइँको मोबाइलमा म्यासेज आउँदा तपाइँको औँठी भाइब्रेट गर्छ वा औँठीले रिमोट कन्ट्रोलको रुपमा काम गर्छ ।
जब तपाइँले औँला हल्लाएर नै टेलिभिजनको च्यानल चेन्ज गर्न सक्नुभयो भने कस्तो लाग्ला ? हो अब यो काल्पनिक कुरा यथार्थ बन्दैछ । लगबार इंक कम्पनीले यस्तो ब्लुटुथवाला औँठी बनाएको छ जुन अरु जो सुकै ब्लुटुथवाला ग्याजेटसँग कनेक्ट हुनसक्छ । ८५ पाउण्ड मूल्यवाला यो औँठी रिमोठ छिटै बजारमा आउने बताइएको छ।
सोनी लाइट डिभाइस स्पिकर
सोनी लाइट डिभाइस स्पिकरले आवाजका साथसाथै प्रकाश पनि पैदा गर्छ । स्मार्टफोनबाट पनि नियन्त्रण गर्न सकिने यो डिभाइसलाई तपाइँ आफ्नो कोठाको सिलिंगमा लगाउन सक्नुहुन्छ वा टेबुलमा डेकोरेटिभ ल्याम्पको रुपमा पनि सजाउन सक्नुहुन्छ । अनि एक पन्थ दुइ काज भनेझैँ यसबाट गित संगीत सुन्ने र बत्ती बाल्ने दुबै गर्न सक्नुहुन्छ ।
तपाइँलाई यदि कपडा धुने समयमा समस्या हुन्छ, सादा र रंगीन कपडा भिन्नाभिन्नै धुने झण्झट छ भने यसका लागि एउटा समाधानको उपाय आएको छ । एउटा यस्तो वासिंग मेसिन आउँदैछ जसमा एकै समयमै तपाइँले अनेक रंगका कपडा धुन सक्नुहुन्छ ।
एलजीका टि्वन वास वासिंग मेसिन देख्दा सामान्य भएपनि यसभित्र सादा र रंगीन कपडालाई छुट्टाछुट्दै सफा गर्नेगरी छुट्टाइएको हुन्छ ।
बिएमडब्लु आइ थ्री
छिटै बिएमडब्लु आइ थ्री सेल्फ पार्किंग कार आउँदैछ जुन आफै पार्क हुन्छ । कारलाई पार्किंग एरियाको बाहिरै छाडेर आफ्नो बाटो लागे हुन्छ यो आफै पार्किंगमा गएर पार्क हुन्छ । लेजर स्क्यानर प्रविधिको सहायताले यो कार आफ्नो पार्किंगको सही ठाउँमा गएर अडिन्छ । यो कार निर्माण भएर संचालनमा आउन केही समय लाग्ने बताइएको छ ।
आइकोनिक वाकम्यान एनडब्लु जेडएक्स टू
कुनै जमानामा बजारमा आफ्नो रवाफ कायम राख्न सफल आफ्नो वाकमेनलाई सोनी कम्पनीले पुनः ल्याएको छ । यसमा हाइ डेफिनेसन अडियो प्लेयर छ भने एकसाथ १० हजार गित स्टोर गर्न सकिन्छ । यसले हाइ रिजोलुसन अडियो मोबाइल भन्दा धेरै गुणा राम्रो आवाज पैदा गर्छ । यसको स्टोरेज क्षमता १२८ जिबी तथा ब्याट्री ब्याकअप ६० घण्टा हुन्छ ।
एसस जेनफोन टू
एन्ड्रोइड फाइभ ललिपप ओएस मा चल्ने एसस जेनफोन टू मोबाइल फोर जिबी र्याम भएको विश्वको पहिलो स्मार्टफोन हो । यसमा ५.५ इन्चको फुल एचडी डिस्प्ले रहेको छ । साथै ६४ बिट इन्टेल २.३ गिगाहर्ज क्वाडकोर प्रोसेसर, १३ मेगापिक्सेल रियर क्यामरा तथा ५ मेगापिक्सेलको सेल्फी क्यामरा लगायतका फिचर्स रहेका छन् ।
रुसी ह्याकरले बनाए हत्यारा पेनड्राइभ, जसले खरानी बनाइदिन्छ टिभी र कम्प्युटर
यसको नामै हो ग्याजेट किलर । किनकी यसले तपाइँको कम्प्युटर देखि लिएर टेलिभिजन सबैलाई खरानी बनाइदिन सक्छ । एकजना रुसी ह्याकरले यस्तो पेनड्राइभको निर्माण गरेका छन् जसले जुनसुकै ग्याजेटलाई तत्कालै फ्राइ गरिदिन सक्छ ।
युएबी किलर भी टू नामको यो पेनड्राइभ घुसार्ने बित्तिकै यसले उक्त ग्याजेटमा २२० भोल्टको करेन्ट प्रवाह गरिदिन्छ । जसका कारण ल्यापटप देखि लिएर टेलिभिजन सम्म, जसमा यो पेनड्राइभ घुसार्न मिल्न सबै विस्फोट भैहाल्छन् ।
रुसीसेक्योरिटी अनुसन्धानकर्ता समेत रहेका र डार्क पर्पलको नामले चिनिने ती ह्याकरले आफुले निर्माण गरेको पेनड्राइभको शक्ति प्रमाणित गर्नका लागि एक भिडियो बनाएर सार्वजनिक गरेका छन् । जसमा उक्त पेनड्राइभ घुसार्दा एउटा ल्यापटप विस्फोट भएको देख्न सकिन्छ ।
उनले यो पेनड्राइभका कारण युएसबी पोर्ट भएका हरेक डिभाइस खतरामा परेको चेतावनी दिएका छन् । लगभग सबैजसो स्मार्टफोनले युएसबी मोड सपोर्ट गर्नुका साथै टेलिभिजन, कम्प्युटर, राउटर तथा मोडेमहरु सबैलाई उक्त पेनड्राइभले निस्तेज बनाइदिन सक्ने उनको भनाइ छ ।
यस्तो भयानक पेनड्राइभ निर्माण भएको खबर सार्वजनिक भएसँगै प्रविधि सुरक्षा विज्ञहरुले आफ्नो डिभाइसमा जस्तो पायो त्यस्तो पेनड्राइभ नघुसार्न सल्लाह दिएका छन् ।
यसअघि ११० भोल्ट करेन्ट प्रवाह गर्ने हत्यारा पेनड्राइभ बनाएका ती ह्याकरले पछिल्लो पेनड्राइभ बेच्ने तथा प्रयोग गर्ने आफ्नो कुनै योजना नभएको जनाउँदै भनेका छन् : यो एटम बम जस्तै हो, राख्दा मज्जा हुने तर प्रयोग गर्न नसकिने | एजेन्सी